Dowlada Somalia oo Sheegtay in ay ku qanacsan yihiin go’aanka Maxkamada ee dib u dhigista… – Hagaag.com
Dowlada Somalia oo Sheegtay in ay ku qanacsan yihiin go’aanka Maxkamada ee dib u dhigista…
Maxkamada Cadaallada Caalamiga ah ee ICJ ee qaadeysa dacwada Badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa ugu danbeyntii go’aan ku gaartay in mudo Labo bilood ah dib loo dhigo dhageysiga wajiggii labaad ee doodda labada wadan.
Danjiraha Midowga Yurub ee dowladda Soomaaliya Cali Saciid Fiqi oo la hadlay BBCda ayaa sheegay in ay ku qanacsan yihiin go’aanka ay gaartay maxkamada isaga oo yiri” Annaga markii hore waxaan dalbanay in la guda galo dhageysiga doodda balse haddana waan ku qanacsannahay go’aanka ay gaartay Maxkamada ee dib loogu dhiggay dhegeysiga dacwadda.
Cali Saciid Fiqi ayaa sheegay in maxkamadu markii ay aragtay dalabka iska hor imanaya ee labada dal go’aanka qaadatay, iyadoo u aragta in muddo Labo bilood ah ku soo diyaar-garoobi karto dowladda Kenya.
”Labo bilood wax badan ma’aha, Kenya dabcan wey ku diyaar garoobi kartaa, waayo markii hore iyagu waxey dalbadeen in la siiyo mudo 12 bilood ah, laakiin hadda maxkamadu waxey go’aan ku gaartay in dib loo dhigo muddo Labo bilood ah oo keliya” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Danjiraha.
Mar la weydiiyay in laga talo-galiyay go’aankan ka hor inta aysan Maxkamadu qaadan ayuu yiri” Maya Annaga iyo Kenya midna latashi Maxkamadu kalama sameynin go’aankeeda waayo iyada ayaa u madax-bannaan”
Danjire Fiqi ayaa ugu danbeyntii sheegay in ay rajeynayaan in dacwada dib loo furo 04 bisha November ee isla sanadkan oo ku dhamaanaya waqtiga ay Maxkamadu dib u dhigtay.
Lama oga sida ay dowladda Kenya uga fal celin doonto go’aanka ay gaartay Maxkamada Cadaallada ICJ madaama markii hore dalabka dowladda Kenya uu ahaa in muddo 12 bilood ah la siiyo si ay ugu soo diyaar-garoowdo.